Sida loo rogo ama An iPhone Video inay MP4?
Apple Sharuucda suuqa adduunka ay iPhone. Sannad kasta, waxa aanu ku bixiyeen version cusub oo ka mid ah iPhone iyo lambarada jaale kulanaa malaayiin ah. IPhone ay ku guulaysatay inay adkeeyso ay meel ka mid ah dadka isticmaala iyo xirfadlayaasha ka domains kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa jira waqtiyo mid u aragto dhibaato ka content geeyo ka iPhone on qalab kale. Iyadoo Wondershare Video Converter, users badalo karaan video iPhone qaab MP4 ah.
Part1: Best Video iPhone in MP4 Video Converter: Wondershare Video Converter Ultimate
Part2: 2 Methods si ay u gudbiyaan iPhone Video si aad u computer
Sida codsi desktop awood badan, Wondershare Video Converter Ultimate ayaa ku guulaystay in uu caawiyo macaamiisha badan oo leh baahida ay diinta ka video. Ku cayaaridda tiro ka mid ah qaabab ayaa hadda noqday fudud sida Wondershare Video Converter Ultimate la Timaadda awoodda files ka baaraandegidda ka qaab oo kala duwan iyo bixinta wax soo saarka sida shuruudaha aad. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, daawashada, wadaagga, iyo riyaaqayaa videos at qalab kasta oo lagu sameeyey macquul ah sida dadka isticmaala hadda dooran kartaa qaabab kala duwan, halka diinta videos ay.
Halkan waxaa ku qoran liiska astaamaha ka dhigi cadcad ka mid ah dhammaan dadka isticmaala iyo xirfadlayaasha Wondershare Video Converter Ultimate:
Isagoo soo muuqday Converter ugu dhaqsiyaha badan ee suuqa, waxaa ilbiriqsi ay xafiiltamaan ay xawaare oo ah 30 jeer ka dhakhsi badan codsiyada caadiga ah.
Dhignaashada ayaa hadda la kordhiyay sida users badalo karaa videos ay gebi ahaanba qaab kasta si ay u tagaan oo ay la qalabka durugsan iyo desktop.
Iyada oo Wondershare Video Converter Ultimate, users hadda qulquli karaan warbaahinta ay u gal telefishanka iyaga oo aan isticmaalka qalab xira sida USB ama bax ballaaran.
Iyada oo ah Support DLNA ay jariiradu ka dhisay, waxa ay sidoo kale saamaxaya kuwa isticmaala in ay ku kaydiso videos HVEC ee size yar oo aan laga badinin ka soo tayada.
Iyada oo taageero ka wifi, users hadda wareejin karaan videos ay ay casriga ah. Tani waxay ka saartaa in ee fiilooyinka aan micno lahayn.
A dhisay qalab tafatirka saamaxaya kuwa isticmaala in lagu daro qaybaha kala duwan in ay videos. Interface tafatirka Waa wax fudud oo laga heli karaa mid ka mid user ku darto gii saamaynta video.
A Video Downloader hal click caawin lahaa inaad u keydisaa kasta video offline marka aad u aragto in aad browser. Qaadashada files warbaahinta aad kaliya noqday fudud la codsigan.
Diinta Video iPhone lagu MP4 Isticmaalka Wondershare Video Converter Ultimate
Tallaabada 1 degsado iyo ku rakibidda Wondershare Video Converter Ultimate
Tallaabada ugu horreysa ee aad u baahan tahay inaad kala soo baxdo Mudanayaasha ee Wondershare Video Converter Ultimate website-ka. Gujinaya link si toos ah u bilaabi lahaa download ah. Marka download dhamaato, waa inaad ku labanlaabtaa karaa guji faylka .exe oo laga bilaabi karo habka rakibo. Habka loo xirxiro waxay tahay si caddaalad ah wax fudud oo aan muddo dheer qaadan doonaa.
Tallaabada 2 Loading file la doonayo galay Wondershare Video Converter Ultimate
Hadda oo habka loo xirxiro aad dhameystirneen, waxaad dooran kartaa file aad wareejin ka iPhone isticmaalaya Lugood (Talaabooyinka looga hadli doono ka dib). Interface ayaa kaa caawinaysaa in aad si fudud u jiidi file la doonayo galay interface lahayd habka koombiyuutarka Ciyaalle. Wixii kuwa ka jecel habka soo jireenka ah ee uploading files, waxaa sidoo kale ku jiraa.
Tallaabada 3 Dejinta qaabka taas oo video ah waa in loo roggi
Doorashada qaabka saxda ah waa lagama maarmaan, halka diinta aad video. Idinkuna ma waxaad doonaysaan in aakhirka la qaab qaldan ka dib markii on diinta video ah. Riixaya icon qaab image kuu tilmaami lahaa in uu furmo qaab wax soo saarka ka halkaas oo aad ka dooran kartaa MP4. Sidoo kale, waayo, kuwa doonaya kala duwan oo qaab qalabka kala duwan, waxaa jira tiro ka mid ah fursadaha aad heli karto.
Tallaabada 4 Isticmaal ayeey Tool ah si kor Video
Wondershare Video Converter Ultimate Ku siinayaa fursad u xaalkaa aad videos ka hor inta aanad la bilaabo hawlaha qaab beddelidda. Si ka duwan oo kale oo qalab badan oo video tafatirka, Kanu waa cadaalad ah oo fudud oo uu leeyahay interface ah waa u fududahay in la fahmo wixii user. Isticmaalka this qalab tafatir oo lacag la'aan ah, waxaad ku dari kartaa saamaynta badan oo aad video iyo codsan miirayaasha. Ha iloobin in aad badbaadin isbedelada.
Talaabada 5 Billow hawlaha qaab beddelidda
Marka aad la sameeyo la-socodka tafatir ah, waxaad badbaadin kartaa isbedel iyo isticmaashaa batanka 'badalo' on koonaha midig. Tani waxay ka bilaabataa diinta aad iPhone video taas oo ahayd in qaab .mov in MP4. Hawlaha qaab beddelidda socdaa ay dhowr daqiiqo, si xawli ah, oo waa ka dhaqso badan oo dhan converters kale video in suuqa ay 30 jeer.
Habka 1: Isticmaalka Lugood,
Users soo bixi kartaa oo rakibi Lugood (laga heli karaa website Apple ee) in ay xogta ka iPhone wareejiyo kombiyuutarada ay. Tallaabooyinka lagu wada hadlay hoos ku qoran:
Talaabada 1: Marka hore, waxaad u baahan tahay in aad furaysto iPhone in your computer iyadoo la isticmaalayo Cable USB ah. Iyadoo Lugood oo u baahan in la shaqeeya aad kombuutarka, furid aad iPhone kaas oo aad tagayso si ay u gudbiyaan xogta. Dooro icon ee macruufka qalab on toolbar Lugood.
Talaabada 2: ka category 'Apps' Doorashada ka galeeysid iyo hoos boggan ugu dhaadhacaya si ay leeg- saxda ah ee idiin keeni qaybta 'File Sharing' taasoo timid ka dib markii liiska Shabaqa Home.
Talaabada 3: Dooro mid ka mid ah barnaamijyadooda ku hoos File Sharing maktabadda document ay arkaan. Isticmaal jiita iyo hoos u ikhtiyaarka inuu u dhaqaaqo video ka iPhone in Computer ah.
Talaabada 4: Apps muuqda suuqa kala this gaar ah waa kuwa lagu oggol yahay ay sameeysa in ay u muuqdaan. Wuxuu uun xaq u leedahay inay xakameeyo helitaanka shaqada. Si kastaba ha ahaatee, default videos aad in ay yihiin kuwa aad u toogtaan ama abuuro badbaadi kara in your computer iyadoo la isticmaalayo Lugood fudayd.
Habka 2: Isticmaal Wondershare TunesGo :
Wondershare Bixisaa ay madal codsi u gaar ah si ay u fuliyaan kala iibsiga ee files u dhexeeya qalabka macruufka iyo kombiyuutarka. Waxaad kala soo bixi kartaa ' Wondershare TunesGo ka website ee macruufka iyo nidaamyada hawlgalka Window '.
Talaabada 1: Buuxi habka download iyo rakibidda. Marka aad ku dhameysatay kaalinta habka rakibo, bilowdo codsiga.
Talaabada 2: A suuqa kala furi doonaa oo dhan fursadaha. TunesGo kuu ogolaanaya in aad ka your computer iyo qalab macruufka ah u gudbiyaan xogta labada dhinacba.
Talaabada 3: Dooro fursad u dhoofinta files si aad desktop. Interface waa cadaalad ah fududahay in la isticmaalo iyo waxay kaa caawin lahaa in kala iibsiga deg deg ah ee files.
Talaabada 4: Waxaad waafajinta karaa playlists oo idil ama xusho liis dheer oo kuwan raadkaygay iyo videos in aad rabto in aad desktop.
Iyadoo TunesGo, waxaa laguu xaqiijin karaa of interface saaxiibtinimo iyo xawaaraha deg deg ah si ay xogta ka iPhone wareejiyo si aad desktop.
Sida loo Beddelaan F4V galay MP4 la Loss Tayada Zero
Sida loo jar / milmaan / Beddelaan MP3 galay MP4
20 Free YouTube in converters MP4
Top 5 Flash in converters MP4 for Windows iyo Mac
MOV vs MP4, Faraqa u dhexeeya MOV iyo MP4
> Resource > MP4 > Sida loo rogo ama An iPhone Video inay MP4?